Sales & Marketing Assistance(Insurance) | Job in Myanmar ﻿
1. အရောင်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခြင်း
3. သတ်မှတ်ရက်များအတွက် Report များ တင်ပြနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
အသေးစိတ်တာဝန်ဝတ္တရားများ/Detail Duties and Responsibilities
1. သတ်မှတ်ထားသော အရောင်းစီမံကိန်း ပြည့်မီကျော်လွန်နိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်။
2. ဖောက်သည်ရှာဖွေရေးအတွက် online marketing, Tele marketing စနစ်များ သုံးခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ထိုး ဖောက်ရန်။
3. ဖောက်သည်များထံသို့ ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိအောင် ဝင်ရောက် ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်။
4. ပြိုင်ဖက်လုပ်ငန်းများအပေါ် စီစစ်လေ့လာခြင်းနှင့် ညှိုနှိုင်းတိုင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန်။
5. လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အခြေအနေများအား သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း အစီရင်ခံ တင်ပြရန်
6. အထက်အကြီးအကဲမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရပေးအပ်သော အခြားတာဝန်များကိုလည်းအချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြီးကြပ် စီမံဆောင်ရွက်ရန်
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်
•	Sales & Marketing နှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည် (အတွေ့အကြုံရှိရန်မလိုပါ)
•	လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းပေးမည်
•	ရုပ်ရည် ပြေပြစ်ချောမွေ့ပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရမည်။
•	အသက် ၁၈ နှင့် ၂၅ ကြား သွက်လက်ထက်မြက်ပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ် ရှိရမည်။
•	အင်္ဂလိပ်စာ (အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော) အခြေခံရှိလျှင် ဦးစားပေးမည်
•	Microsoft Word, Excel အား အခြေခံ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	Presentation skill ကောင်းမွန်ရမည်။
•	အရပ်အမြင့် အနည်းဆုံး (5' 3") ရှိရမည်။
•	လိုအပ်ပါက ရန်ကုန်နှင့် နယ်ရုံးခွဲများတွင်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Sales & Marketing Assistance(Insurance) Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon YOUNG INVESTMENT GROUP CO., LTD Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Investment Jobs in Myanmar, jobs in Yangon